MLBB စိန်ဖြည့်ရင်း နှစ်သစ်ဆုလက်ဆောင်များ ကံထူးနိုင်မယ့် Codashop ရဲ့ သင်္ကြန်ပွဲတော်! | Codashop Blog MM
Home Games Mobile Legends MLBB စိန်ဖြည့...
MLBB စိန်ဖြည့်ရင်း နှစ်သစ်ဆုလက်ဆောင်များ ကံထူးနိုင်မယ့် Codashop ရဲ့ သင်္ကြန်ပွဲတော်!
Codashop တွင် MLBB စိန် (၅,၀၀၀)ကျပ်ဖိုးနှင့်အထက်ဝယ်ယူရင်း ကံစမ်းလိုက်ပါ!
MLBB Player ဘော်ဒါတွေအတွက် Codashop မှာစိန်ဖြည့်ရင်း နှစ်သစ်ဆုလက်ဆောင်များ ကံထူးနိုင်မယ့် Codashop ရဲ့ သင်္ကြန်ကံစမ်းမဲအစီအစဥ်လာပါပြီ!
Codashop တွင် မည်သည့်ငွေပေးချေမှုနှင့်မဆို MLBB စိန် (၅,၀၀၀)ကျပ်ဖိုး အနည်းဆုံးဖြည့်လိုက်ပါ။ (Codashop တွင်စိန်ဖြည့်ရန် ဒီမှာနှိပ်ပါ)
(၅,၀၀၀)ကျပ်ဖိုးနှင့်အထက် ဝယ်ယူသော ငွေပေးချေမှု တစ်ခုချင်းစီအတွက် ကံစမ်းခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ကံစမ်းမဲလက်မှတ်သီးသန့်ပို့ပေးသွားမည်မဟုတ်ဘဲ (၅,၀၀၀)ကျပ်ဖိုးနှင့်အထက် ဝယ်ယူထားသော Transaction ID တစ်ခုစီကို ကံစမ်းခွင့်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး Codashop မှ မဲနှိုက်ကံစမ်းပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၂၂၊ ဧပြီလ (၁၂)ရက်မှ ဧပြီလ (၃၀) ရက်နေ့အတွင်း ဝယ်ယူမှုများအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
ကံစမ်းမဲတွင်ပါဝင်သော ဆုလက်ဆောင်များ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ(၁,၀၀၀)ကျော်ခန့်ဖြစ်ပါသည်။ ဆုလက်ဆောင်များအနက် Apple Watch၊ Redmi Buds၊ Power Bank နှင့် စိန်လက်ဆောင်များပါဝင်သည်။
ကံစမ်းမဲကာလအတွင်း MLBB စိန်ပမာဏအများဆုံးဝယ်ယူသူအတွက် Apple Watch Series7(၁) လုံး
ကံထူးသူ(၃) ဦးအတွက် Xiaomi Redmi Buds3(၃) ဆု
ကံထူးသူ(၃) ဦးအတွက် 40,000mAh Power Bank (၃) ဆု
ဒါအပြင် နောက်ထပ်ကံထူးရှင် (၃)ယောက်ကိုလည်း Codashop မှ (၅၀,၀၀၀)ကျပ်ဖိုးစိန်လက်ဆောင် ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ကံထူးသူများကို Codashop Myanmar ၏ တရားဝင် ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာမှတဆင့် မေလ(၁၆)ရက်နေ့ထက် နောက်မကျဘဲ ကြေညာပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ကံထူးရှင်သည် ကံထူးရှင်ကြေညာသောနေ့မှစပြီး (၄)ပတ်အတွင်း ဆုလက်ဆောင်ပို့ဆောင်ပေးရမည့် နေရပ်လိပ်စာကို Codashop မှ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားထားသော အီးမေးလ်မှတဆင့် အကြောင်းပြန်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမပြန်ပါက ဆုလက်ဆောင်ကို ရုပ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ဆုလက်ဆောင်များကို ကြေညာပြီး (၃)ပတ်မှ (၄)ပတ်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆုလက်ဆောင်များကို ငွေသားဖြင့်ဖလှယ်ခြင်း၊ အခြားအမျိုးအစားဖြင့်ဖလှယ်ခြင်း၊ တစ်ဆင့်ခံပေးပို့ခြင်းများကို လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။
၁။ ဤအစီအစဥ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားသူများ ပါဝင်ခွင့်မရှိပါ။
၄။ ဤအစီအစဥ်တွင် Codashop Myanmar မှ ဝန်ထမ်းများပါဝင်ခွင့်မရှိပါ။
၅။ အငြင်းပွားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာပါက Codashop Myanmar မှ အဆုံးအဖြတ်သာလျှင် အတည်ဖြစ်ပါသည်။
၇။ ဝယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါက (သို့မဟုတ်) အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုပါက Codashop Myanmar Facebook Messenger မှတဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Previous articlePUBG Mobile UC ကို easyPoints နဲ့ဝယ်ယူပြီး 52% အထိ UC ဘောနပ်ရယူလိုက်ပါ!
Next articleMLBB ဂိမ်းထဲက ကံကောင်းခြင်းတွေကိုမျှဝေရင်း Codashop မှ စိန်လက်ဆောင်ရယူပါ!
Do You Remember April 25, 2022	At	2:46 am
စိန္ေတာ့ဝယ္ထားတာပဲ…ေပါက္ရင္ ဘယ္ကိုဆက္သြယ္မွာလဲဗ်ာ…မဲက ေပးၿပီးၿပီလား…09898548551
gumjala April 26, 2022	At	4:08 pm
ဟိုင်း! ကံထူးတဲ့သူတွေကို ဝယ်ယူစဥ်မှာထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ Email မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကံထူးတဲ့သူတွေရဲ့ Email လိပ်စာ(အပြည့်အစုံမဖော်ပြပါ) တွေကိုလည်း Codashop Facebook Page ကနေကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Soe Htet April 24, 2022	At	12:35 am
phyothawzin April 23, 2022	At	12:18 pm
My id 572086728
gumjala April 26, 2022	At	4:09 pm
pau pau April 21, 2022	At	10:06 pm
Than Tun Aung April 21, 2022	At	4:32 pm
Myo zaw April 20, 2022	At	11:58 pm
Thank. Love codashop
AhSi MoLi April 20, 2022	At	8:49 am
Htet Wai April 19, 2022	At	12:28 pm
Please give me diamond.
Shanthein April 19, 2022	At	1:35 am
Boo April 18, 2022	At	5:41 pm
gumjala April 20, 2022	At	12:35 pm
ကံထူးတယ်ဆိုရင် Email ကနေတစ်ဆင့်ကြေညာပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Email လိပ်စာထည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော်။
Sai Khaing Myal Aung April 18, 2022	At	2:54 pm
Ma Zarkyi Aye April 18, 2022	At	1:43 pm
gumjala April 20, 2022	At	12:38 pm
အနည်းဆုံးစိန်(၅,၀၀၀)ကျပ်ဖိုးဝယ်တဲ့သူတွေထဲက ကံထူးသူများကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
H. S. A April 17, 2022	At	12:06 am
naymakha April 14, 2022	At	6:17 pm
naymakha April 14, 2022	At	6:16 pm
gumjala April 18, 2022	At	1:17 pm
kyalsin April 14, 2022	At	4:49 pm
gumjala April 18, 2022	At	1:18 pm
No worry br bro!
Akari Chan April 13, 2022	At	12:22 am